အမြတ်ခွန် မှန်ကန်စွာ ပေးဆောင်ရေး ဒို့အရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » အမြတ်ခွန် မှန်ကန်စွာ ပေးဆောင်ရေး ဒို့အရေး
အမြတ်ခွန် မှန်ကန်စွာ ပေးဆောင်ရေး ဒို့အရေး
Posted by Ma Ma on Mar 7, 2012 in Complaint / Claim, Health & Fitness | 26 comments
ဒီကနေ့ တပေါင်းလပြည့်နေ့မို့ အလုပ်ပိတ်ပါတယ်။
ဇာတိမြို့မှာလည်း နှစ်စဉ် တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာ ဘုရားပွဲတော်၊
စတုဒိသာ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းပွဲနဲ့ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲတွေရှိလို့
မိသားစုတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကိုပေါက်နဲ့အပြိုင် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ လက်ဆော့ထားတာ
ရန်ကုန်ရောက်သူတွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြို့နယ်အသင်းက စတုဒိသာ ကျွေးပွဲကို ဦးဆောင်လှူဒါန်းပါတယ်။
သူ့လို လူရိုင်းလေး လုပ်ချင်လား။ သူမလေးက ကူညီပါရစေတဲ့။
တမြို့တနယ်ရောက်နေကြတဲ့ မြို့သူ မြို့သားတွေကလည်း ကိုယ့်ဇာတိကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ စိတ်ကလေးတွေကိုယ်စီနဲ့
ကိုယ့်မြို့စာသင်တိုက်က ဆရာတော်ကိုလည်း သွားဖူးခဲ့ပါသေးတယ်။
စားကြဦးမလား မွမွချိုချို မန်းမရွေး
အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဦးဆောင်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ မြို့ခံဆရာတော်ရဲ့ အနီးကပ်ဦးဆောင် ကြိုးစားမှုတွေနဲ့
မျက်စိခွဲစိတ်ကုသဆောင်နဲ့ မျက်စိဆေးခန်းကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ကုသနိုင်ခဲ့တာ
အခုဆိုရင် ၁၀နှစ်ကျော်ပြီ ထင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ခြား တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကုသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
တောနယ်တွေကနေ မျက်စိကုသဖို့ ရောက်လာကြသူတွေဟာ
ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ နားနေနိုင်၊ ညအိပ်နေနိုင်သလို
စားသောက်စရိတ် မတတ်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စားနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိကုသဖို့အတွက် ခွဲစိတ်ကရိယာနဲ့ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေကို သီတဂူဆရာတော်က အဓိက လှူဒါန်းပေးပြီး
ဆရာဝန် ဆရာမတွေကလည်း လုပ်အားဒါန ပေးလှူကြပါတယ်။
စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးနည်းနဲ့ ကုသတာဖြစ်လို့ တတ်နိုင်တဲ့လူနာတွေအနေနဲ့
ဆေးဝါးနဲ့ ခွဲစိတ်ပစ္စည်း စတာတွေကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။
မတတ်နိုင်တဲ့ လူနာတွေကိုတော့ အလှူ့ရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းငွေထဲက ကုန်ကျခံပြီး ကုသပေးပါတယ်။
အဲဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ မျက်စိဆေးခန်းမှာ လူနာပေါင်းများစွာရဲ့ အမြင်တွေကို ကြည်လင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်
ကိုယ့်မြို့တစ်မြို့တည်းတင်မကပဲ အနီးအနားက မြို့ရွာတွေကတောင် လာရောက်ပြီး မျက်စိကုသမှုကို ခံယူကြပါတယ်။
အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အမြတ်အစွန်းကိစ္စက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
မျက်စိဆေးခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ကုသမှုအပိုင်းမှာ အောင်မြင်ပေမယ့်…..
ပရဟိတ လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အလှူ့ရှင်များရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးမှုတွေနဲ့ လည်ပတ်နေရတာဖြစ်တာကြောင့်….
အမြတ်အစွန်းအနေနဲ့ တစ်နှစ်လုံးမှ ၀င်ငွေထွက်ငွေစာရင်းရှင်းရာမှာ ကျပ်ငွေတစ်သိန်းကျပ်တိတိသာ ရရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတာကလည်း ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ ယခုနှစ်မှာ အမြတ်ခွန်ဆောင်ဖို့အတွက် ဆင့်ခေါ်ခံရတယ်လို့ ဆရာတော်က ပြောပြပါတယ်။
အမြတ်ခွန်အရာရှိထံကို တာဝန်ခံဆရာဝန်ကပဲ သွားတွေ့ရမလား……
ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ ဆရာတော်ကပဲ သွားအစစ်ခံရမလား …….
ကဲ…. အမြတ်ခွန်ကို မှန်ကန်စွာပေးဆောင်စေလိုကြသော သဂျီးတို့၊ FR တို့လို ဗဟုသုတကြွယ်ဝကြသော ရွာသူားကြီးများအား အကြံဥာဏ်များ တောင်းလိုပါတယ်။
အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းများ ပေးလှူကြပါဦး………
အင်း .. ဒါကတော့ အစိုးရဆီမှာ လိုင်စင်တင်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ထင်တယ် …
ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ဒီအတိုင်းလုပ်လို့မရပဲ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ယူထားရတယ်နဲ့တူပါတယ် ..
လုပ်ငန်းအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတာဆိုတော့ အမြတ်ခွန်လိုက်လာတာ ဥပေဒေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ သဘာဝကျပါတယ် …
အမြတ်ခွန်ရုံးကိုသွားတွေ့ရမယ့်သူက လုပ်ငန်းအနေနဲ့လိုင်စင်တင်ထားတဲ့သူပေါ့ …
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့ကိစ္စတွေက စာအုပ်ထဲမှာပြထားတဲ့ rule တွေထဲကနေ အပြင်ရောက်သွားလေ့ရှိတယ် … ဒါပေမယ့် သေချာရှင်းပြပြီး နည်းလမ်းရှာလိုက်ရင် ပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ် …
ဒီလို ပရဟိတ လုပ်ငန်းလေးတွေ ကြတော့ ကင်းလွတ်ခွင့်တို့ လျော့ပေါ့ခွင့်တို့ ဆိုတာလေးတွေ ပေးရင်ကောင်းမှာနော်။ သူများတိုင်းပြည်များမှာ ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလည်း သိတော့သိချင်တယ်။
အင်း အခွန်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထဲထဲဝင်ဝင် မသိလေတော့ ဘယ်လိုမှ မပြောနိုင်ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအစိုးရ ကျင့်သုံးနေတဲ့ အခွန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ရွာသားတွေထဲက တစ်ယောက်လောက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ရေးသားပေးစေလိုပါတယ် တင်ပြီးသားထဲက ရှိတယ်ဆိုရင်လဲ လမ်းညွှန်ပေးပါဦး သိချင်လို့ပါဗျာ
သိပ်ဟုတ် သိပ်မှန် သိပ်တန်ဘိုးရှိပါတယ်
အဲဒါဘဲ …. တစ်နှစ်ကိုသိန်းထောင်ချီမြတ်နေတဲ.လုပ်ငန်းတွေက အခွန်တပြားမှမဆောင်ဘူး။
လက်တွေ.လက်တွေ. …..။ ပရဟိတ ကြတော. …..? အပေါ်ကကိုအောင်ပု ဘာလို.မဆဲသွားလဲမသိဘူး ။
ဒါနဲ. ……….ဟိုတလောက ဘွားဆူး သွားလှုချင်တယ်ဆိုတာ အဲဒီနေရာလား …။
ဘွားဆူးတင်မဲ.ပို.စ် ကိုစောင်.နေတာ ။ တကယ်လို. တစ်နေရာထဲဆိုရင် မမနဲ.ဘွားဆူး ပေါင်းပြီးလုပ်ပါလား
ကျုပ်တို.က သတင်းရထားပြီးဘယ်တော.လှုပေးရမလဲလို.စောင်.နေတာ ….။
ကျုပ်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို.အိပ်နေတဲ.ဖျာက အဲဒီမြို.ကထွက်တာဘဲ ။ဟုတ်သလား မမ ….။
ဆူး နဲ့ မမ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အလှူခံထွက်မှာပါ.. ခဏလေး စောင့်ပေးပါ အချက်အလက်တွေ စောင့်နေလို့ပါ.. သေချာပေါက် အလှူခံ ထွက်ပါ့မယ်။
နိုင်ဂျံဂါးသာသနာပြုဆိုတဲ့.. ဆတော်ကြီးတွေ.. မန်းနီးလောင်းဒရင်းထဲ.. ပါမှန်းမသိ… ပါနေတာတွေ..ရေးရမှာဖြစ်နေလို့.. ။ အဲ.. မြန်မာ့ဥပဒေထဲမဟုတ်ဖူးခင်ည.. ယူအက်စ်ဥပဒေနဲ့ကို ညိကုန်တာ..အများကြီး..
ပိုက်ဆံမကိုင်တတ်(မကိုင်ရ)တဲ့..ဆတော်ကြီးတွေဆီ.. ပိုက်ဆံဝိုင်းလှူ ဘစ်ဇနက်လုပ်ခိုင်းတော့.. ဒုက္ခတွေရောက်ရော..
တကယ်တော့.. ဘာသာရေးက.. အမြတ်ခွန်ဆောင်ဖို့မလိုရပါဘူး..
ဘာသာ၊သာသနာအတွက်လှူငွေကလည်း.. အခွန်ကင်းငွေ tax deductible donations ဖြစ်ရပါတယ်…
အခွန်ဌာန( ယူအက်စ်မှာတော.. အိုင်အာအက်စ်)ကခေါ်ရင် တော့ သမ္မတတောင်သွားရမှာ…
You can deduct your contributions only if you make them toaqualified organization. To becomeaqualified organization, most organizations other than churches and governments, as described later, must apply to the IRS.
How to check whether an organization can receive deductible charitable contributions. You can ask any organization whether it isaqualified organization, and most will be able to tell you. Or go to IRS.gov and enter “Pub 78” in the search box. Click on “Search” and then on “Exempt Organizations Select Check” (www.irs.gov/charities). This new online tool will enable you to search for organizations eligible to receive deductible charitable contributions. You can also call the IRS to find out if an organization is qualified. Call 1-877-829-5500. (For TTY/TDD help, call 1-800-829-4059.)
War veterans’ organizations, including posts, auxiliaries, trusts, or foundations, organized in the United States or any of its possessions.
ပြုသမျှ ကုသိုလ်တွေ အတွက် သာဓု, သာဓု, သာဓု ခေါ်ပါတယ် မမရေ။
ကျွန်မ လဲ ပါဝင် ချင်ပါဘိတော့။ အားကျပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ လေးတွေ ထပ်တင်ပါဦး။ အားရပါးရ ကြည့်ရအောင်။
မွမွချိုချို မန်းမရွေး လဲ အရင်က သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အခု တော့ မြန်မာမုန့် ဆို အကုန် စားချင်တယ်။ ;-)
အခွန်အကြောင်း ဝင်ရွှီး ရရင်တော့
ယူကေ မှာ – ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း ကို Non-Profit/ Charity Organisation လို့ သတ်မှတ် ထား ရင် အခွန်လျှော့ပေးပါတယ်။
ဝင်ငွေ ဝင်နေတာမို့ လုံးဝအခွန်လွတ် တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ Non-Profit / Charity Organisation တွေအတွက် အတော်သက်သာတဲ့ အခွန်ဥပဒေ သတ်သတ် ရှိပါတယ်။
ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ ဘာသာရေး အဖွဲ့ အများကတော့ အခွန် ပေးစရာမလိုပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အခွန်တရားဝင်ဆောင် ထားသူ က အဲဒီ Non-Profit / Charity အဖွဲ့ တွေ/ ဘာသာရား အဖွဲ့တွေကို ငွေလှူရင် သူလှူတဲ့ ငွေ ပေါ်မှာ အစိုးရ က သူဆောင် တဲ့ အခွန် ရာနှုန်း ကို ပြန်ပေါင်းပေးပါတယ်။
ဥပမာ – ၁ကျပ် လှူရင် အစိုးရက ၂၅ပြား ပြန်ပေါင်းထဲ့ပေးတော့ ကိုယ်က အဖွဲ့ကို ၁ကျပ် ၂၅ပြား လှူသလို ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို Gift Aid Claim လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မ အတွေးကို ပြောရရင်တော့
အဲဒီ မျက်စိခွဲ ဆေးခန်း လေး က လူနာတွေ ဆီက ပိုက်ဆံမယူ ဘဲ ပြင်ပအလှူ ရှင် များ ရဲ့ ရံပုံငွေ နဲ့ လည်ပတ် နေတာဖြစ်လို့ ဝင်ငွေ ရှိလုပ်ငန်း မဟုတ် လို့ ယူဆ မိပါတယ်။
ဒီတော့ သာမာန်အားဖြင့် တော့ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရန် မလိုပါ လို့ လဲ ယူဆမိပါတယ်။
သို့သော် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ နဲ့ တစ်နိုင်ငံ မှာတော့ အခွန်ဥပဒေ တွေကွာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာလဲ ဘာသာရေး / Non-Profit / Charity အဖွဲ့ တွေ အတွက် အခွန်ဥပဒေ ရှိမှာပါ။ မြန်မာပြည် ဥပဒေ နားလည်သူ တစ်ယောက်ယောက် ကို သေသေချာ ချာ မေးကြည့် ရင် ပိုပြီး အတိအကျ သိပြီး ရှင်း သွားမယ် ထင်တယ်။
စာရင်းဇယား အသေအချာရှိ ရင် အဲဒါတွေ ကို ကူလုပ် ပေးတဲ့ စာရင်းကိုင် က သွားတွေ့ တာ ပိုကောင်းပါမယ်။ သူက အခွန်အကြောင်းလဲ နားလည် ရမှာပေါ့။
ဝင်ငွေ မရှိတာ ကိုလဲ သေသေချာချာ ပြောပြရင် အခွန်ဝန်ထမ်း တွေ လဲ နားလည်ကောင်း ပါရဲ့။
နောက်ဆုံး ချွန်တွန်း လုပ်ရရင်တော့
ကိုယ်က ဥပဒေဘောင် ထဲမှာရှိနေပြီး အဲဒါကို မှ မတရား တမင် အနိုင်ကျင့် ရင်တော့ ပွင့်လင်း ရာသီမို့ ဆိုင်ရာကို တိုင်သာတိုင် ပေတော့ မမရေ။
တကယ်တော့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ဟာ ကိုယ်လဲ မလုပ်နိုင် သူများ လုပ်တာ ကိုလဲ ကဖျက်၊ ယဖျက် မလုပ်ကောင်းပါဘူး။
၀ိုင်းဝန်းပြီး အကြံဥာဏ်ပေးကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူအများအားကိုးအားထား ပြုနေရတဲ့ မျက်စိဆေးခန်းလေး ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ကိုယ့်မျက်မြင်အခြေအနေအရကတော့ ရိုးသားတဲ့ ပကာသနမရှိတဲ့ ကရင်လူမျိုး တောဘုန်းကြီးတွေမို့
သဂျီးပြောသလို မန်းနီးလောင်ဒရီလုပ်လို့ ရလောက်တဲ့ အနေအထား မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အခုပြောပြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆရာတော်ကို လျှောက်ထားပြပါ့မယ်။
ဆိုလိုချင်တာ.. လက်ခံရယူတာ.. မှားနေပါသကွယ်..
မန်းနီးလောင်းဒရင်းထဲ.. ပါမှန်းမသိ… ပါနေတာတွေဆိုတာ.. နိုင်ငံခြားမှာ အလှူငွေရတဲ့.. ဆရာတော်ကြီးတချို့ပြောတာပါ..
ဖြစ်စေချင်တာက… အလှူငွေနဲ့မရပ်တည်ပဲ.. ဘစ်ဇနက်အနေနဲ့လုပ်ဖို့ပါ…။
အဲဒီမှာမှ.. နန်းပေ၇ာ့ဖစ်လျှောက်ပြီး.. အခွန်လျှော/မဆောင် လုပ်ရမှာပေါ့..။
လောလောဆယ်ကတော့.. သီတဂူဆ၇ာတော်ကြိးနာမယ်သုံးရင်.. အားလုံးပြီးသွားမယ်ထင်မိပါတယ်..။
တကယ်တော့ ခွဲစိတ်ကုသတဲ့အဆင့်အထိဆိုရင် ဘိဇိနက်အမျိုးအစားထဲမှာ ထည့်ရပါလိမ့်မယ် … ဒီအတိုင်း အလကားလုပ်ပေးတယ်ဆိုရုံနဲ့ ခွင့်ပြုလေ့မရှိပါဘူး … ဒါဟာ ဘာသာရေးနဲ့လဲမဆိုင်ဘူးလေ … အခုကိစ္စမှာခက်နေတာက လုံးဝအလကားကုသတာလဲမဟုတ်ဘူး … စီးပွားရေးလုပ်တာလဲမဟုတ်ဘူး … ဆရာတော်ကြီးက ဦးဆောင်ရတာကလဲ ငွေလှူတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေဦးဆောင်တာကို လူတွေက ပိုပြီးယုံကြည်ကြလို့ပဲ … လူတွေဦးဆောင်ရင် အလှူငွေများများမရကြသလို အစိုးရကလဲ အလွယ်တကူခွင့်ပေးလေ့မရှိဘူး …
အဲဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေအတွက် လွှတ်တော်မှာဥပဒေအသစ်တစ်ခု ဆွေးနွေးကြဖို့ကောင်းနေပြီ …
စိတ်ညစ်ပါတယ် လိပ်ဖြစ်တာ အခွမ်ထူလို့ ဆိုသလိုဖြစ်နေဘီ
တိုင်းပြည်ရဲ့ စာအုပ်ထည်းက အခွန်စည်းကြပ်တွေကို လိုသလိုဘုံးနေတဲ့
အခွန်စောင် ( ဦးစီးကိုတစ်ဝက်ကြေးပေးပြီး နည်းနည်းဆောင် )
အခွန်ရှောင် ( လစ်ရင်လစ်သလို မှိန်းနေတဲ့ လူတွေ ရာထူးကြောင့် မဆောင်ဘဲနေတဲ့လူတွေ )
ဦးစီးမှူး ( သူခိုးအကြီးစားကြီး )
အဲ့သည်သတ္တဝါတွေရဲ့ လုပ်ဇာတ်တွေကိုထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုမေပြာကြဘဲနဲ့
တန်တော့တန်တော့ ဦးစီးမှူးဆိုတာ နာထင်တယ် တူတို့အမျိုးဖမ်မယ်
ကြားဖူးတာ နယူးယောက်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းမှာ ကရင်ဆရာဝန်ကြီး တယောက်ရှိတယ်။ (အခုဆုံးသွားပြီထင်တယ်) သူက အခွန်မဆောင်ဘူးတဲ့၊ အခွန်ရုံးကခေါ်လည်း မသွားဘူး၊ ဖမ်းချင်လာဖမ်းလို့ စိန်ခေါ်သတဲ့။ သူ့ဝင်ငွေ အတော်များများ (အခွန်ပေးရမှာထက်)ကို ဘုရားကျောင်းချာ့ခ်ျကို လှူပစ်တယ်။ အခြားမှာ လှူတာလဲ ရှိမှာပေါ့နော်။ သေချာတာတခုကတော့ စာရွက်စာတမ်း လက်ခံပြေစာဖြတ်ပိုင်းနဲ့ ရှိလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး အခွန်ရုံးက လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ပြေတယ် (အပိုအလိုကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တွေးကြည့်ကြပါ။ အတိအကျ ဒီအတိုင်းတော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါမယ်) ပြောချင်တာ စာရင်းဇယား အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိထားရမယ်။ မှားလည်း ရိုးသားတဲ့အမှားဖြစ်ရမယ်။ မလုပ်တတ်လို့ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ဆင်ခြေ မဟုတ်ဘူး။ အများနဲ့ ရုံးကဏ္ဍားနဲ့လုပ်ရင် မတတ်လည်းတတ်ရမယ်၊ မသိလည်း သိရမယ်။ အခုကိစ္စမှာ ဆေးခန်းကို လူမှုအသင်းအဖွဲ့အဖြစ် မှတ်ပုံတင် သို့ တင်ဖို့ကြိုးစားထားသလား၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အရေးကြီးတယ်နော်။ အာဏာပိုင်များက ချမပေးလို့ မှတ်ပုံတင်မကျသေးဆိုရင်လည်း ဝင်ငွေထွက်ငွေ စာရင်းကို ရပ်မိရပ်ဖ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနဲ့ တိုင်ပင်လုပ်ထားရမယ်။ ဒါမှ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အခါ အပြင်ကနေ အကူအညီပေးဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာ..။
ပထမ – ဒီဟာက ဘာမှတောင် တရားဝင်ပုံမရဘူး။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း နားလည်မှု့နဲ့ ခရီးရောက်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် –
ကူညီချင်စိတ်ရှိတဲ့သူက ကူညီလို့ ရသလို
ဒုက္ခပေးချင် ရစ်ချင်တဲ့သူက (အောင်မြင်မအောင်မြင်တာအပထားလို့) ရစ်လို့တော့ရတယ်။ တကယ်တော့ ရစ်စရာအကွက်တွေက အများကြီးပဲ။
ဒါကြောင့် တနည်းနည်းနဲ့ ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်မနေပဲနဲ့
အခွန်မှုးကို ဘာ မှနားမလည် မသိတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ သွားတွေ့ပြီး
အခွန်မှူးဆိုတာ (မိုးပေါ်ကျဗိုလ်ပြုတ်တွေကလွဲရင်) အင်မတန်ပါးနပ်ပါတယ်။
ကျောက်ခဲကို အားကုန်ခံပြီး လက်နာခံပြီး ရေမညှစ်ပါဘူး။
ကိုယ်က ကျောက်ခဲနဲ့တူဘို့ အဓိကပါပဲ။
ရေရှည်အတွက်တော့ ဥပဒေနဲ့အညီ ဘောင်ဝင် တရားဝင် စံနစ်ကျအောင် အခုကတည်းက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသင့်ပါတယ်။
ဒါထက် – ကျုပ်သာ အဲဒီဆေးခန်းကို ကိုယ်စားပြုသွားတွေ့ရရင် အခွန်မှူးကို ဒီလိုဖါးခဲ့မှာ…
“ ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းလေးက စေတနာအဓိကနဲ့ ကုပေးနေတာပါ..
ဆရာလဲ မျက်စိခွဲချင်ရင်လာခဲ့ပါ။ အခမဲ့ ခွဲစိတ်ပေးပါ့မယ်…
အကောင်းအတိုင်းလဲ စိတ်ပါရင်ခွဲလို့ရပါတယ်….” လို့…….
” ကျုပ်တို့နိုင်ငံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း နားလည်မှု့နဲ့ ခရီးရောက်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် -ကူညီချင်စိတ်ရှိတဲ့သူက ကူညီလို့ ရသလို ဒုက္ခပေးချင် ရစ်ချင်တဲ့သူက (အောင်မြင်မအောင်မြင်တာအပထားလို့) ရစ်လို့တော့ရတယ်။ တကယ်တော့ ရစ်စရာအကွက်တွေက အများကြီးပဲ။” ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..
“လောလောဆယ်ကတော့.. သီတဂူဆ၇ာတော်ကြိးနာမယ်သုံးရင်.. အားလုံးပြီးသွားမယ်ထင်မိပါတယ်..။ :lol:”
သူကြီးကတော့…. အလုပ်ဖြစ်မယ့်နည်းကို နောက်ဆုံးမှပြောရတယ်လို့…
ဒီနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဥပဒေအရ မည်သည့်နည်းဖြင့် ၀င်ငွေရသည်ဖြစ်စေ-
အစိုးရထီမှအပ(အခွန်နှုတ်ပြီးသားမို့) အခြားကံစမ်းနည်းလမ်းများနဲ့ ငွေ/ပစ္စည်းရရင်ဖြစ်ဖြစ်
ပြီးတော့ ဆေးကုတာလို ၀န်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းများမှာ
၀န်ဆောင်မှု့ရငွေတိုင်းအတွက် သတ်မှတ်တဲ့ နှုံးထားနဲ့ကောက်ခံပါတယ်။
ဆေးခန်းက ၇ှုံးတာမြတ်တာကိုတော့ အမြတ်ခွန် သတ်မှတ်စည်းကြပ်ပါတယ်။
ဆေးခန်းက မမြတ်ဘူးဆိုတာ လက်ခံတယ်ထား
(return တော့ တင်ဘို့ဝတ္တရားရှိတယ်နော်)
အဲဒီမှာ လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ၀န်ထမ်း၊ သူနာပြု၊ ဆရာဝန် တွေ ပိုက်ဆံယူပြီးလုပ်တာဆိုရင်
ဘောင်ကိုပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ဆံ့အောင် ချဲ့လိုက်ပါလို့ ……
အခွန်ရုံကတော့ မလာနဲ့ ဗျာ လာလိုက်ရင်တော့
စည်ပင်ကရောဘာထူးသလဲ အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သော လုပ်ငန်းလိုင်စင်တဲ့
အခွန်ရုံးကတော့ မလာနဲ့ ဗျာ လာလိုက်ရင်တော့
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ ပန်းချီကားချပ်လေးလိုပါပဲ၊ ရူ့ခင်းပုံလေးကြိုက်လို့ ကူးသွားပါတယ်နော်၊ အခွန်ကိစ္စကတော့ ကျနော်နားမလည်လို့ မဆွေးနွေးပဲ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေပဲ ဖတ်သွားပါတယ်နော်….
ကိုယ်ကချည်းပဲ သူများဓာတ်ပုံတွေ ကူးနေရတာ ကြာပေ့ါ။
ကိုယ့်ဓာတ်ပုံလေး ကူးသွားတယ်ဆိုတော့ မြောက်သွားတယ်။
အဲလို ရှု့ခင်းလှလှလေးတွေ တွေ့နိုင်ဖို့ သီတဂူ သုမေဓာ ဆေးရုံ အလှူကျရင် လိုက်ပါဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ် နော။
နားမလည် ပါးမလည် စွာနဲ့
အော် … အမြတ်ခွန် အမြတ်ခွန်
အမြတ်ရလို့ အခွန်ဆောင်ရတဲ့ သဘောပေါ့နော။
ကျွန်မတို့နယ်မှာ စားရိတ်မျှပေး ဆေးခန်းဖွင့်ခဲ့တာတော့ ဘာအခွန်မှ မဆောင်ရပါ။
စာရင်းကတော့ အခွန်ဆောင်ဖို့ မတင်ရလည်း အများပိုင်ငွေဆိုတာ ပိုပြီးတောင် စာရင်းဇယားရှိရပါတယ်။
ကိုယ်မှန်တာလုပ်တယ်ဆိုတာ အများကယုံကြည်နေလည်း မပေါ်လာသေးတဲ့ ရန်သူအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
သဂျီး အမိန့်ရှိသလို သီတဂူဆရာတော်ကြီးနာမည်နဲ့သာ ကို်င်ပေါက်လိုက်ပါတော့။
အမြတ်ခွန် မှန်ကန်စွာပေးဆောင်ရေး ဒို့အရေးးးး…..
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေဆီက အခွန်ငွေတွေ မှန်မှန်ရမှ နေပြည်တော်ကြီးကို ဒိထက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင် တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ..။
ပြည်သူတွေရဲ့အခွန်နဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် Sea Game ကို ခမ်းခမ်းနားနား ၀ှဲချီးကျင်းပနိုင်မှာပါ..။ ဧည့်သည်တော်တွေ ဂုဏ်သရေရှိစွာစီးဖို့ မာစီးဒီးကားကြီးတွေဝယ်နိုင်မှာပါ..။
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲဖို့ကလည်း မသေချာသေးတော့ အဆင်မပြေရင် တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို တိုက်ဖို့ လက်နက်တွေ၊ လေယာဉ်တွေ ပြည်သူ့အခွန်ငွေနဲ့ ၀ယ်နိုင်မှာပါ..။ တပ်မတော်ကြီးကိုလည်း အင်အား(၁)သန်းလောက်ဖြစ်အောင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ..။
မြန်မာဘီလျံနာအချို့ အခွန်ရှောင်တာက သူ့ကုသိုလ်နဲ့သူပါ..။ ထောက်ပံ့ရမယ့်သူတွေများတာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ချင်းစာရမှာပါ…။
သာမန်ပြည်သူတွေ အခွန်မှန်ကန်စွာပေးဆောင်ဖို့၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဆီက အခွန်မကျန်ရအောင် အထူးကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်..။
အခွန် မှန်ကန်စွာပေးဆောင်ရေး ဒို့အရေး..
ပြည်သူ့ချွေးနဲစာ အခွန်ငွေများ မှန်ကန်စွာသုံးစွဲရေး ဒို့အရေးးးး…..:D
” သီတဂူဆရာတော်ကြီးနာမည်နဲ့သာ ကို်င်ပေါက်လိုက်ပါတော့ ”
ဘယ့်နှယ် သီတဂူဆရာတော်ကြီး ကို ဆွဲထည့်နေကြတာတုန်း ။
သူ့ခမျာ ပိုက်ဆံ လှူပေးပြီးပြီပဲ တော်ရောပေါ့ ။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင်တောင် အာဏာပိုင် တွေကို မပိုင်လို့ ၊
ငါ့ကိုလာထိရင် ငါ့အစောင့်တွေ ( နတ် ) တွေက မနေဘူး ဆိုပြီး ၊
( နတ် ) တွေကိုပဲ အားကိုးနေရတဲ့ဟာ ။
ဆေးခန်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုင်စင်မရှိသေးဘူး ထင်ပါတယ်။
မြတောင်ဆရာတော်က သီတဂူဆရာတော်ကြီးကို အပူကပ်ပြီး အလုပ်မရှုပ်စေချင်ပါဘူး။
စာရင်းအင်းကတော့ စပြီးဆေးခန်းဖွင့်ကတည်းက စာရင်းကိုင်တဲ့အဖွဲ့ သီးသန့်ရှိတာမို့ အတိအကျ ရှင်းလင်းပြနိုင်မှာပါ။
စားရိတ်မျှပေးဆိုတာကလည်း ကိုယ့်အတွက်လိုတဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်းကိုသာ ကိုယ်ကကျခံဖို့ လိုတာပါ။
ဆရာဝန်/မတွေကိုတော့ စားစရိတ်ငြိမ်းနဲ့ ရန်ကုန်ကို ကြို/ပို့ ပေးရတယ်။